Infographic: antontan'isa momba ny haino aman-jery sosialy 21 izay mila fantarina isaky ny mpivarotra amin'ny 2021
Talata, Jona 29, 2021 Talata, Jona 29, 2021 Elena Teselko
Tsy isalasalana fa mitombo isan-taona ny fitaoman'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fantsom-barotra. Mipoitra ny sehatra sasany, toa ny TikTok, ary ny sasany mijanona saika hitovy amin'ny Facebook, izay mitarika fiovana miandalana amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa. Na izany aza, efa an-taonany ny olona no zatra marika naseho tao amin'ny media sosialy, noho izany ny mpivarotra dia mila mamorona fomba vaovao hahatratrarana fahombiazana amin'ity fantsona ity. Izany no mahatonga ny fijerena ny fironana farany izay zava-dehibe amin'ny marketing rehetra
Alatsinainy Martsa 29, 2021 Alatsinainy Martsa 29, 2021 Tom Kuhr
Ny taona 2020 dia nanova ny anjara toeran'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fiainan'ny mpanjifa. Nanjary làlan'aina ho an'ny namana, fianakaviana ary mpiara-miasa izany, forum ho an'ny fikatrohana ara-politika ary ivon-toerana ho an'ny hetsika virtoaly maimaimpoana sy kasaina hatao. Ireo fanovana ireo dia nametraka ny làlan'ny fironana izay hanova ny tontolon'ny varotra media sosialy amin'ny 2021 sy ny sisa, izay hampiasana ny herin'ny masoivoho marika hisy fiantraikany amin'ny vanim-potoana vaovao amin'ny marketing nomerika. Vakio hatrany raha mila fanazavana momba ny
Social Web Suite: Sehatra fitantanana haino aman-jery sosialy namboarina ho an'ny Publishers WordPress
Sabotsy, Martsa 20, 2021 Alahady, Martsa 21, 2021 Douglas Karr
Raha mamoaka ny orinasanao ary tsy mampiasa haino aman-jery sosialy amin'ny fomba mandaitra mba hampiroboroboana ny atiny, dia tena tsy ampy amin'ny fivezivezena ianao. Ary… ho an'ny valiny tsara kokoa, ny lahatsoratra tsirairay dia mety tena hampiasa fanatsarana mifototra amin'ny sehatra ampiasainao. Amin'izao fotoana izao, misy safidy vitsivitsy fotsiny amin'ny famoahana mandeha ho azy avy amin'ny tranokalanao WordPress: Ny ankamaroan'ny sehatra famoahana media sosialy dia manana endrika ahafahanao mamoaka amin'ny RSS feed. Optionally,
Agorapulse: Inbox tsotra sy mitambatra ho an'ny fitantanana media sosialy
Alarobia, Martsa 17, 2021 Alarobia, Martsa 17, 2021 Douglas Karr
Folo taona lasa izay, tao amin'ny World Media Marketing World, nihaona tamin'ilay Emeric Ernoult izay tsara fanahy sy manam-pahaizana - mpanorina sy talen'ny Agorapulse. Be olona ny tsenan'ny fitaovana fitantanana haino aman-jery sosialy. Ekena. Nefa i Agorapulse dia mandray ny media sosialy satria mila izany ny orinasa… dingana iray. Mihasarotra hatrany ny misafidy ny fitaovana (na fitaovana) mety ho an'ny filantsika. Ho an'iza (toa ahy) manandrana mitantana kaonty marobe izay voadaroka sy
Tsy maninona ny habe raha te hanaiky izany isika na tsia. Na dia tsy mpankafy lehibe indrindra amin'ireo tamba-jotra ireo aza aho, rehefa jereko ny fifandraisako - ny sehatra lehibe indrindra no andaniako ny fotoanako. Mahatonga ny fandraisana anjara ny laza, ary rehefa te-hanatratra ny tambajotran-tserasera misy aho dia ireo sehatra malaza ahafahako manatona azy ireo. Jereo fa efa nilaza aho fa misy. Tsy hanome torohevitra amin'ny mpanjifa na olona mihitsy aho mba tsy hiraharaha izany